"दिल्ली दौडाह" :: Press Chautari ::
“मेरो देश कहिल्यै हारेको छैन ।
र अहँ, कदापी कसैसँग झुक्न सक्दैन मेरो देश र मेरो स्वाभिमान ।”
यता परदेशमा बसेर हामी यसो भन्दै गर्दा उता घरदेशतिर हाम्रा नेताहरु छिमेकी कहाँ धाको धाई छन् । उनीहरु आफु सुकिलो ओढेर देशको मैलो मात्रै देखाउछन् । छिमेकीको संघार टेक्न नपाउँदै उनीहरु बिन्ती गर्छन–“अब के गर्ने ?” घोसे मुन्टो लगाउदै हात पैmलाउछन्–“हजुर, समाधान के होला ?” उनीहरु हाम्रो घरझगडा छिमेकीलाई सुनाउछन्, घरभित्रकै समस्या समाधानको लागि छिमेक गुर्हाछन् । देशको कालो मैलो अरुलाई सुनाउछन् । नाङ्गै देशको छाती खोलेर सर्वाङ्ग मुट–कलेजो देखाउछन् । घरको पीरमर्का उनैलाई सुनाउछन् । यसैलाई हाम्रो कमजोरी मानेर छिमेकीहरु हामी तिर घरी घरी गिद्धे दृष्टि तेर्साउछन् । चोर औंला ठडाउँछन् । यसो गर र त्यसो गर भनेर अह््राउँछन् । सधेंरीहरु सांध मिच्न खोज्छन् । निर्धक्क मेची र काली तरेर हाम्रै छातीमा बुट बर्जाछन –ड्याम् ड्याम्ती । हेर ! हाम्रो शीर कति निहुरिएको ?
–“...फेरी ठुला दलका ठालु नेता दिल्ली उडे ।”
–“दिल्लीबाट फलाना नेता काठमाण्डौं फकिए...”
अखबार, रेडियो र टेलिभिजनहरुमा मुख्य समाचार बनेर नेता काठमाण्डौं–दिल्ली सवार गर्छन । यता एउटा नागरिकको शीर लाजले लत्रक्कै निहुरिन्छ फेरी । खै के माग्न दिल्ली दौडन्छन् नेता गण ? के फल्दैन र पाक्दैन हाम्रो घुरेनहरुमा ? अनि पालैपिच्छे के टिप्न दिल्ली उड्छन् उनीहरु ?
छि ः तिमी जनता पनि कस्तो ? तिनैको जय जयकार मनाउँन एयरपोर्ट पुग्छौं । सञ्चो बिसञ्चो सोध्दै सडक जाम गर्छौ । सडक–बाटोमा पसिना बगाएर आधा पेट बाँच्नेहरुको गाँस काट्छौ । अनि छि ः हामी पत्रकार भनाउँदाहरु, लज्जाले निहुँरिएको शीर अनि स्खलित अनुहार कैद गर्न विमानस्थल दर्गुछौं । र सुनाउँछौं÷देखाउँछौ दिल्ली दौडाहको इतिबृत्तान्त । सायद त्यसपछि घमण्डीले फुलिन्छौ किन कि मैले दाहाल, देउवा, नेपाल, कोइराला...र अन्य कुनैको ब्रेकिङ न्यूज फलो अप गरेको छु । किन कि समाचारका बाइलाइनहरुमा, तस्बिरको ठीक मुन्तिर, टेलिभिजनको पर्दामा मेरो नाम, मेरो अनुहार, मेरो आवाज क्रमसः छापिन्छ, देखिन्छ र सुनिन्छ । उता मेरो सम्पादक र मेरो हाकिम अबेरसम्म तिनैका अनुहार हेरेर दंग हुन्छन् । यता म आनन्दको भुस निद्रा निदाउँछु ।
होइन, राष्ट्रियताको सवालमा एउटा देशको स्वाभिमान अर्काे देशले कसरी थेग्न सक्छ ? घरभित्रको समस्याको समाधान छिमेकमा खोज्नुले कुन अर्थ राख्छ ? ठालु नेताहरुलाई दिल्लीले बोलाउछ कि अतालिँदै हारगुहारको लागि उनीहरु स्वयम् दिल्ली दौडिन्छन् । दिल्ली समस्या हो कि समाधान ? कुन आस्थाले दिल्ली दर्शन गर्छन ठूला भनाउँदाहरु ? हाम्रा ठालुहरु उताका ठुलालाई मात्रै भेटेर आउँछन् कि गुण्डाका नाइके र माफियासँग साँठगाँठ गरेर पनि आउँछन् ? यस्तै एउटा गम्भिर प्रश्नले आम नागरिकको हैसियत राख्ने एक नेपालीलाई बारम्बार घोंची रहन्छ ।
मंसीर ४ नजिकिदैछ । तिनै ठुलादलका ठालु नेताले नै मंसीर ४ लाई चुनावको तिथि तोकी दिए । यता आपैm तिथी तोकेर कुन धामीलाई जोखना हेराउन दिल्ली धाउँछन कुन्नी नेताहरु ? कि साइतको घडिपोला देखाउन दिल्ली पण्डित गुहार्न गाका ? यत्तिबेला त जनताको घरदैलोमा गएर विगतमा भए गरेका गल्तीको आत्माआलोचना पो गर्नु पर्ने होइन र ? जनता साँच्चिकै के चाहन्छन् ? बुभ्mने समय होइन र ? ति ठालुहरु किन भ्रममा छन ?
भ्रममुक्त हुनु जरुरी छ । जनताको चेत तिनैले खुलाई दिए । अब जनता त्यहि गर्छन्, जे उनीहरु चाहन्छन् । किन कि मंसीर ४ त्यत्ति टाढा छैन ।
मंगलवार, २०७० पुस २९ गते ०८:२९ / Tuesday, Jan 14, 2014 8:29 am